Homeसमाचारज्योतिष शास्त्र अनुसार: बिहीबारको दिन के गर्दा मिल्छ शुभफल हे्नुहोस्
December 24, 2020 admin समाचार 12761
ज्योतिषशास्त्र अनु’सार बिहीबारको दिन बृहस्पतिको पूजा गर्नाले सुखद पारिवा_रिक जीवन, शिक्षा, ज्ञान र धन प्राप्त हुने धार्मिक विश्वा’स छ ।शास्त्रअनुसार बिहीबारका दिन केही का’महरु भने बर्जित गरिएको छ । बृहस्पति ग्रहको अनुकू’लताको लागि केही यस्ता कार्यहरु हुन्छन् जुन बिहीबारको दिन गर्नु उचित मानिँदैन । बिहीबा’रको दिन के गर्दा सुभफल मिल्छ ?
सूर्य उदाउनु पहिलानै शु’द्ध भएर भगवान विष्णुलाई गाईको शुद्ध घ्यू हालेर दियो बाल्नुस् । केसरी वा बेसा’रको टिका निधारमा लगाउनुहोस् । पहेँलो वस्तु दान गर्नुहोस् । भगवान शिवलाई प’हेँलो रंगको लड्डू चडाउनुहोस् । केराको रुखलाई पूजा गर्नुहोस् र प्रसा’दमा पहेँलो रंगको पकवान वा फल चढाउनुहोस् । केरा दान गर्नुहोस् ।
बिहीबा’रको दिन गर्न नहु’ने पाँच काम
बिहीबारलाई धा’र्मिक दिन मानिन्छ । ब्रम्हाण्डमा अवस्थित ९ ग्रहको गुरु मानिने वृहस्पतिको दिन मानिने बिहीबार धार्मिक दृष्टिले मह’त्वपूर्ण मानिन्छ ।
बिहीबार गरेका धार्मिक कार्य’को फल तत्काल मिल्ने विश्वास गरिन्छ । तर बिहीबार केही काम गर्न भने निषेध गरिएको छ ।१. कपाल नु’हाउनु हूँदैन, २. रौं का’ट्नु हुँदैन, ३. दारी काट्ने वा नङ काट्ने, ४. भारी कप’डा धुनु र फोहोर गर्नु हुँदैन, ५. लक्ष्मीको मात्र पुजा पनि गर्नु राम्रो मा’निदैन ।
शास्त्रमा बिहीबार क’पाल नुहाउन नहुने उल्लेख छ । खासगरी महिलाहरुले बिहीबार कपाल नुहाउनु अ’शुभ मानिन्छ । महिलाको जन्मकुण्डलीमा वृहस्पति पतिकोरुपमा रहने हुँदा यो दिन कपाल नुहाउनु नराम्रो मानिन्छ । बिहीबार कपाल नुहाउँ’दा पति र सन्तानलाई अ’शुभ हुने शास्त्रमा उल्लेख छ ।
बिहीबार’को दिन कपाल वा दारी काट्नु अशुभ मानिएको छ । वृहस्पतिलाई जीवन अर्थात जीवन भनिएको छ । बिहीबार रौं काट्दा गुरु ग्रह कमजोर हुने भनिन्छ । यसो गर्दा शि’रमा असर गर्ने र उमेर समेत कम हुने शास्त्रमा उल्लेख छ ।
बिहीबार नङ का’ट्नु र दारी काट्नु अशुभ मानिन्छ । यस्ता कार्य बिहीबार गर्दा जागिरमा समस्या हुने र पदोन’न्ती हुनुको साटो घटुवा हुने समेत सम्भा’वना हुने शास्त्रमा उल्लेख छ ।
बिहीबार कपाल धुने, कप’डा सफा गर्ने, दारी काट्ने, रौ काट्ने, फेशियल, नङ काट्ने काम कहिले पनि नगर्नुस् । त्यस्तै घरको सरसफाइ माकुराको जालो ह’टाउने काम पनि बिहीबार नगर्नु नै उत्तम हुन्छ ।
बिहीबारको दिन भारी कप’डा धुनु राम्रो मानिँदैन । बिहीबारको दिन ठूला ठूला कपडा धुँदा अशु’भ हुने मानिन्छ । बिहीबार घरमा भएको फोहोर बाहिर फाल्नु पनि नराम्रो मानिन्छ । बिहीबारमा घरमा भएको फोहोर बाहिर फाल्दा अशुभ हुने मानिन्छ । घरको सर’सफाइ सकेसम्म बिहीबार नगर्नु नै राम्रो हुन्छ ।
बिहीबारको दिन लक्ष्मी नाराय’णको दिन मानिन्छ । यस दिन पुजा गर्दा लक्ष्मीको मात्र गर्नु हुँदैन । पुजा गर्दा लक्ष्मी नारायणको पुजासँगै गर्नु राम्रो हुन्छ । यसले पति पत्निबी’चको सम्बन्ध पनि राम्रो हुने शास्त्र’मा उल्लेख छ । – खबर हबबाट
February 4, 2021 admin समाचार 7236
नायिका सुष्मा कार्की र स्वेता खड्का’की बहिनी आरती खड्काबीच मिलापत्र भएको छ। सोमबार राति आफूलाई आरती खड्काले दरबारमार्ग’स्थित लन्डन पब क्याफेमा कु’टि’ए’को भन्दै सुष्मा कार्की महानगरीय प्रहरी वृत्त, दरबारमार्गमा उ’जुरी दिन पुगेकी थिइन्। उनले प्रहरी
January 25, 2021 admin समाचार 6098
May 18, 2021 admin समाचार 5951